हिमालयन बैंकबाट मनोजबहादुर 'आउट' - Aarthiknews
हिमालयन बैंकबाट मनोजबहादुर 'आउट'
काठमाडौं । हिमालयन बैंकको २७औं वार्षिक साधारणसभाबाट वर्तमान अध्यक्ष मनोज बहादुर श्रेष्ठ बाहिरीएका छन् । बुधबार सम्पन्न भएको सभाले संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट पूर्व राजदूत तथा नेपाली काग्रेसका नेता दिपकुमार उपाध्ययका छोरा(आशिष शर्मा), मनोज बहादुर श्रेष्ठका भाई (प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ), पूर्वप्रधानमन्त्री स्व सूर्यबहादुर थापाका छोरा(सुनिलबहादुर थापा), फैसल लालानी र तुलसी प्रसाद गौतमलाई संस्थापक सञ्चालकमा चयन भएसँगै मनोजबहादुर श्रेष्ठ बैंकबाट आउट भएका हुन । सभाबाट ५ जनाको मात्रै उमेदवारी परेकाले सभाले निर्विरोध निर्वाचित गरेका हुन ।
उक्त सभाले सञ्चालक समितिबाट प्रस्तावित २२ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । पारित गरेसँगै शेयरधनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १० प्रतिशत बोनस र कर सहित १२ प्रतिशत नगद लाभांश समेत पाउने छन् । अब हिमालयन बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बढी हुने भएको छ ।
हिमालयन बैंकको संस्थापक शेयरको विवाद पनि अबको सञ्चालक समितिलाई सभाले जिम्मा लगाएको छ । १५ प्रतिशत संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्नलाई सञ्चालकले एफिओ वा प्रिमियममा शेयर जारी गर्ने भन्ने मोडालिटी अब बन्ने सञ्चालक समितिलाई दिइएको एक शेयर धानीले बताए ।
हिमालयन बैंकमा राणा, श्रेष्ठ, खेतान र पाण्डे समूहबीचको बिबाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । राणा र श्रेष्ठ समूहको एकाधिकार तोडन खेतान समूह सक्रिय रहेको थियो यो सभाले खेतान समूहबाट आशिष शर्मालाई बोर्डमा जिताउन सफल भएको छ । एन टेडिड.कम्पनी प्रालि झम्सिखेलको तर्फबाट अध्यक्ष बनेका मनोजबहादुर श्रेष्ठ र आभा इन्टरनेशनलन प्रालि थापाथलीको तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका अशोक राणाले बैंकमा एकाधिकार जमाएपछि म्युचल टेडिड. प्रालि मार्फत लगानी गरेका खेतान समूहले राणा र श्रेष्ठ समूहको एकाधिकार तोडने कसरतमा लागेका थिए ।
खेतान समूहले बैंक सञ्चालक समितिमा बहुमत कायम गर्नका लागि हबिबि बैंक लिमिटेड पाकिस्तान र कर्मचारी सञ्चय कोष र शशिकान्त अग्रवालको समेत सहयोग लिएका थिए । उक्त बैंकमा पाकिस्तानको हबिबि बैंकको २० प्रतिशत, कर्मचारी संचयकोषको १४ प्रतिशत र शशिकान्त अग्रवालको ४.४ प्रतिशत संस्थापक शेयर रहेको छ । यसैगरी, छायाँ सेन्टरको ८.८९ प्रतिशत संस्थापक शेयर छ ।
हिमालयन बैंकमा अहिले एन टेडिड.कम्पनी प्रालि झम्सिखेलको तर्फबाट मनोजबहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेका थिए । त्यसैगरी, हबिबि बैंक लिमिटेड पाकिस्तानको तर्फबाट फैसल एन लालनी, कर्मचारी संचयकोषको तर्फबाट तुलसीप्रसाद गौतम, छायाँ सेन्टरको तर्फबाट प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ, आभा इन्टरनेशनलको तर्फबाट शुशील बिक्रम थापा सञ्चालक थिए । अहिले हिमालयन बैंकमा ९ जना (अल्टरनेटिभ सहित) सञ्चालकका रुपमा थिए । ती मध्ये एक जना महिला र एक जना स्वतन्त्र गरी ७ जना सञ्चालन हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।
के हुँदैछ हिमालयन बैंकमा, राष्ट्र बैंकलाई थाहा छ ?
मेरो माइक्रोफाइनान्सको नाफा १६ करोडभन्दा माथी